Android အတွက် Nike Run Club APK ကိုဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Nike က Run ကိုကလပ်
Nike က Run ကိုကလပ် APK ကို
Nike က Run ကိုကလပ်: သင့်ပြီးပြည့်စုံသောအပြေး Partner
Nike က Run ကိုကလပ်ခြေရာခံခြင်း run GPS စနစ်အပါအဝင်သင်ပိုကောင်း run ဖို့လိုအပ်ပါတယ် tools တွေကိုရှိပြီး; အသံပဲ့ထိန်းပြေး; အပတ်စဉ်, လစဉ်နှင့်ထုံးစံအကွာအဝေးစိန်ခေါ်မှုများ; သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များအတွက်စိတ်ကြိုက်နည်းပြအစီအစဉ်များ; နှင့်သင့်မိတ်ဆွေများထံမှမရပ်မနားလှုံ့ဆျောမှု။ သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိနှင့် Nike က Run ကိုကလပ်နှင့်အတူလမ်းတစ်လျှောက်ပျော်စရာရှိသည်။
- ANDROID WEAR OS ကို device များအတွက်ပြည့်အဝထောက်ခံ
- TRACK နှင့်ဘဏ္ဍာပြေး
- Nike နည်းပြနှင့်အားကစားသမားများဖြင့်အသံပဲ့ထိန်းပြေး
- ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးနှင့် CUSTOM စိန်ခေါ်မှုများ
- Personal နည်းပြ Plan
- LEADERBOARD တွင်ယှဉ်ပြိုင်
- မိတ်ဆွေများထံမှ IN-run ရူ့
ANDROID WEAR OS ကိုစက်ပေါ်ရှိမှတ်ပုံတင်
သင့်ရဲ့လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်တွင်သင်၏စုံလင်သောပြေးဖက်ကိုရယူပါ။ Android Wear OS ကိုထောက်ပံ့ထားသည့်ကိရိယာများနှင့်သင်၏ပြေးစံချိန်နှင့်ခြေရာခံ။ လျင်မြန်စွာနောက်ပိုင်းမှာအားလုံးကိုသင့်ရဲ့စာရင်းဇယားများမှတပါးသင်၏အ run-we'll စဉ်အတွင်း (Heart-rate ကိုထောက်ခံကိရိယာများပေါ်တွင်) ထိုသို့သောသင့်ရဲ့အကွာအဝေး, အရှိန်အဟုန်, ကြာချိန်နှင့်နှလုံး-မှုနှုန်းအဖြစ်လက်ရှိ run ကိုအသေးစိတျရှုမြင်ကြသည်။
လမ်းကြောင်းအပေါ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အသံတုံ့ပြန်ချက်နှင့်အတူပြည့်စုံအရှိန်အဟုန်, အကွာအဝေး, GPS, လမ်းကြောင်း, မြင့်, နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်မိုင်ခွဲအပါအဝင်သင်လိုအပ်အသေးစိတ်ရယူပါ။
Nike ကနည်းပြ, အထက်တန်းလွှာအားကစားသမားမြားနှငျ့မို Farah နဲ့ Kevin ဟတ်တူသော Entertainment မှ In-နားကိုအသံမှတဆင့်လမ်းညွှန်မှု, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုကိုရယူပါ။ AGRs ပြေးသမားခွန်အားကိုအမြန်နှုန်းနှင့်ခံနိုင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီမယ့်ပျော်စရာနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါကြားကာလကိုအလိုအလျောက်မှတ်သားထားတဲ့သောကြောင့်, သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးကိုထိပုတ်ပါစတင် go ဖြစ်ပါတယ်။
အပတ်စဉ်နှင့်လစဉ်အကွာအဝေးစိန်ခေါ်မှုများအတွက်အပြေးသမား၏ Nike ကကမ္ဘာ့အသိုင်းအဝိုင်း join တစ်ခုသို့မဟုတ်စိန်ခေါ်မှုဖန်တီးနှင့်သင့်သူငယ်ချင်းများဖိတ်ခေါ်ရန်။ , ပန်းတိုင်ရောက်ရှိရန်အောင်မြင်မှုများဝင်ငွေနှင့်အကွာအဝေးသွားပါ။
သငျသညျစတင်ရန်ချင် Fitter get သို့မဟုတ်ပြိုင်ပွဲ-အဆင်သင့်မရဖွစျစေ, မှတ်ပုံတင်သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးအဆငျ့အဘို့အသပ္ပါယ်အစီအစဉ်တွေရှိနေပါတယ်။
သင့်ရဲ့အလျင်မြန်ဆုံး 5K သို့မဟုတ်အရှည်ဆုံးပြေးနဲ့တူပုဂ္ဂိုလ်ရေး Best ရမ်းပြီးအဘို့မှတ်တိုင်တံဆိပ်များနှင့်ဆုဖလားဝင်ငွေ။
မိတ်ဆွေများထံမှ IN-run ရူ့ GET
မိတ်ဆွေများထံမှ In-run ကိုအသံရွှင်လန်းလှုံ့ဆျောမှုလက်ခံရရှိနှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ရွှင်လန်းသူတို့နှင့်အတူထောက်ခံမှုပေးပို့ပါ။
စိတ်ကြိုက် POST-run မျှဝေခြင်း
လူတိုင်းကနေမှသာသင့်ရဲ့အနီးကပ်မိတ်ဆွေများ, ဓါတ်ပုံများ, စာရင်းဇယားများနှင့်စတစ်ကာများနှင့်သူတို့ကိုမြင်တော်မူသောချုပ်ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်လှုပ်ရှားမှုပို့စ်များကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ပါ။
Nike က Run ကိုကလပ်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်စံချိန်နှလုံး-မှုနှုန်း data တွေကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန် Google ကြံ့ခိုင်မှုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
နောက်ခံအပြေး GPS စနစ်၏ဆက်လက်အသုံးပြုမှုဘက်ထရီသက်တမ်းကိုလျော့ချပေးနိုင်သည်။
တစ်ပြေးသွားနှင့် running.feedback@nike.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ခြင်းအားဖြင့်ငါတို့အားတစုံတခုသောတုံ့ပြန်ချက်ပေးရအခမဲ့ခံစားရ
ဤတွင်ဒီ update ကိုအသစ်ဖွင့်အဘယျသို့င်:
- Wear OS ကိုအပေါ်မှတ်ပုံတင်ယခုရရှိနိုင်ပါ! စံချိန်နှင့် Android Wear OS ကိုနှင့်သင်၏ပြေး Track အားလုံးသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုတင်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ, devices တွေကိုထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
PRO-အကြံပြုချက်: စိတ်တိုင်းကျစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အတူဖော်ရွေ running ယှဉ်ပြိုင်ဖို့သင့်သူငယ်ချင်းများကိုစိန်ခေါ်မယ်! စတင်ရေးသားရန်ရန်စိန်ခေါ်မှုများအပိုင်းထွက်စစ်ဆေးပါ။
65.04 ကို MB
Nike က, Inc
အားဖြင့် 5K မှ Couch